မြန်မာ့မီးရထား | ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
၁.၅.၁၈၇၇ ရက်နေ့တွင် Irrawaddy State Railway အနေဖြင့် ရန်ကုန်-ပြည် (၁၆၁)မိုင်အား A01 ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းဖြင့် စတင်ပြေးဆွဲပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမ ဦးဆုံးသော ရထား လမ်း ကို စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
၁၈၉၆ ခုနှစ်တွင် Irrawaddy State Railway သည် Burma Railway Co., Ltd. သို့ ရထား သွားလာမှုနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ငှားရမ်းခဲ့ပါသည်။ ငှားရမ်းခ ကာလ ကုန်ဆုံးသည့် ၃၁.၁၂.၁၉၂၈ ရက်နေ့မှစ၍ Indian Railway Board လက်အောက်သို့ လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ပါသည်။
၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ခွဲထွက်ခွင့် ရရှိသည်နှင့်အညီ မြန်မာ နိုင်ငံအစိုးရသည် Burma Railway Board ကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် British Governor သည် Burma Railway Board ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအား Chief Railway Commissioner သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။
၄.၁.၁၉၄၈ ရက်နေ့ လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက် ငွေစာရင်းမင်းကြီးအား (Financial Commissioner, Lands and Rural Development) Railway Board ၏ ဥက္ကဋ္ဌ (Chairman) အဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန် ပေးခဲ့ပါသည်။
၁.၁၂.၁၉၅၁ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ မီးရထားဘုတ်အဖွဲ့ အက်ဥပဒေ ပြဌာန်းပြီး ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ မီးရထားဘုတ်အဖွဲ့ (Union of Burma Railway) အား ဖွဲ့စည်း၍ အချိန်ပြည့် ဥက္ကဋ္ဌ ကို ခန့်အပ်တာ၀န်ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဥက္ကဋ္ဌသည် Chief Executive Officer တာဝန်ကိုပါ ထမ်းဆောင်ရပါသည်။
၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့မီးရထားကော်ပိုရေးရှင်း (Burma Railway Corporation) အမည်ဖြင့် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး က ဦးဆောင်၍ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ် စေခဲ့ပါသည်။
၁၈.၈.၁၉၈၈ ရက်နေ့ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့က နိုင်ငံတော်၏ တာ၀န်ကို လွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပြီးနောက် ၁.၄.၁၉၈၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့မီးရထား ဟု ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ့မီးရထား သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံထက်(၅၂)နှစ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံထက်(၂၄)နှစ် နောက်ကျပြီး ရထားလုပ်ငန်းကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်(၁၄၀)နှစ် ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ ရထား လုပ်ငန်းများတွင် သက်တမ်းရင့်သည့် ရထားလုပ်ငန်းတစ်ခု အဖြစ် တည်ရှိပါသည်။
On the 4th of January 1948, Myanmar gained independence, andanew Railway Board was instituted with Financial Commissioner, Lands and Rural Development, as Chairman. On the 1st of Decem-ber 1951, the Union of Burma Railway Board Act was enacted under whichafull-time permanent Chairman was appointed,who was also to be the Chief Executive Officer.
The Union of Burma Railway was again reorganizedin 1972 and the power and the functions of the Union of theBurma Railway Board were entrusted into the hands of the management committee with the Managing Director who also was to be the Chief Executives as Chairman and the name, Union of Burma Railways was changed to the Burma Railways Corporation
The State Law and Order Restoration Council took over state power on 18th September 1988 and following the change of the So-cialist Republic of the Union of Burma to the Unionof Myanmar. The name Burma Railways Corporation was changed to Myanma railways on 1st April, 1989. (hereinafter referred to as " MR"). The name Union of Myanmar was changed to the Republicof the Union of Myanmar on 30th March 2011, the name of Myanma Railways was not changed.
17th July 1997 Gangaw – Yaymyetni Line opened.
14th Sept 1997 Pyay – Aunglan Line opened.
26th Mar 1998 Yebyu – Paukpinkwin - Kaloggyi Line opened.
9th Apr 1999 Pyawbwe –Yanaung Line opened.
17th May 2007 HlawKha – University of Computer line opend.
24th Nov 2007 Kyitaunggan – Kyaukse (Double Line) opend.